It has always beenagreat pleasure to cooperate with you in domain business. We, Myanmar Technology Gateway (MTG) would like to kindly inform you the recent policy changes of MPT (Domain Registry) on domain registration .
According to the instruction of MPT (Domain Registry), Domain Registration and Renewal will go with the budget year from now on. Domain start date will assume with started month regardless of the date that you registered and end of budget year September 30th will be the expiry date. For those who wish to extend their domains, September 30th will be last day to extend their domains to another budget year.
There will be redemption period as one month after September 30th and if there is no renewal, domains will be deleted on November 1st. Scenario: If you buy domain in April (any date), you will only need to pay for6months (April to September). As domain will expiry in September 30th, for those who wish to extend will need to extend in September for another budget year.
လတစ်လ ၏ မည်သည့် နေရက်တွင်မဆို လျှောက်ထားလာသော .mm Domain အား အဆိုပါလတွင် စတင်သုံးစွဲသည်ဟုသတ်မှတ်ပြီး ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ နောက်ဆုံးရက် စက်တင်ဘာလ (၃၀)ရက်နေ့သည် အဆိုပါ သုံးစွဲနေသော .mm Domain ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
ထပ်မံသက်တမ်းတိုးလိုသူများအနေဖြင့် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားကာ တစ်နှစ်စာ ပေးသွင်းသက်တမ်းတိုးရန် လိုအပ်သည်။
သက်တမ်းတိုးရန် နောက်ကျသည့်ဒိုမိန်းများအတွက် DNS records များ ယာယီပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာလ တတိယ အပတ်အထိ သက်တမ်းတိုးရန်စောင့်ဆိုင်းမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း သက်မှတ်ရက် ထက်ကျော်လွန်သော ဒိုမိန်းများအား နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ဖျက်သိမ်းကာ အသစ်အနေဖြင့် လျှောက်ထားဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဧပြီလတွင် ဒိုမိန်းဝယ်ယူပါက တစ်နှစ်စာပေးသွင်းရန်မလိုအပ်ပဲ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ စုစုပေါင်း ၆ လစာ ကိုသာ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း ဒိုမိန်း၏ သက်တမ်းမှာ စက်တင်ဘာလ နောက်ဆုံးရက် (၃၀) တွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သောကြောင့် ထပ်မံသက်တမ်းတိုးလိုသူများအနေဖြင့် စက်တင်ဘာလ အတွင်းလာရောက်၍ တစ်နှစ်စာ ပေးသွင်းသက်တမ်းတိုးရန်လိုအပ်သည်။
မှတ်ချက်။ ။ အဆိုပါ သက်တမ်းသက်မှတ်ချက်သည် လက်ရှိ Active ဖြစ်နေသော ဒိုမိန်းများနှင့် အသစ်လျှောက်ထား/သက်တမ်းတိုး မည့် ဒိုမိန်းများအားလုံးတို့ အပေါ် သက်ရောက်အကြုံးဝင်ပါသည်။